Turnkey chirimwa vagadziri uye vanotengesa - China Turnkey chirimwa fekitori
IVEN, ndiani anogona kukubatsira kumisikidza cell kurapa fekitori ine yepasirose yepamusoro tekinoroji rutsigiro uye epasi rese anokwanisa maitiro ekudzora.
1. Jekiseni richigadzirisa Machine
2. Scale Line Yekudhinda Muchina
3. Kuunganidza Mushini
4. Individual Syringe Packaging Machine: Pe bhegi package / blister package
5.Kupakata kwechipiri & KABONI
Sirasi Kushambidza Kuzadza Kuputira Mashini inosanganisira sirasi bhodhoro mweya / ultrasonic kuwacha, yakaoma siraji yekuzadza kana yemvura manyuchi kuzadza uye capping muchina. Iyo inosanganisa dhizaini, mumwe muchina unogona kushambidza, kuzadza uye kumisikidza bhodhoro mune mumwe muchina, kudzikisa mari yekudyara uye yekugadzira. Muchina wese une compact compact chimiro, diki inogara nzvimbo, uye mashoma opareta. Tinogona kushongedza nekutambidza mabhodhoro uye yekuchina zvakare kune yakazara tambo.
SHANGHAI IVEN PHAMATECH inoonekwa semutungamiriri we IV mhinduro turnkey mapurojekiti anotengesa. Zvizere zvivakwa zvekugadzira IV Fluid uye Parenteral Solutions mune Huru (LVP) mavhoriyamu ane masimba kubva 1500 kusvika 24.0000 pcs / h.
Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Muchina À Coudre Led, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer,